Kubuntu १.18.04.०XNUMX LTS मा प्लाज्माको नयाँ संस्करण कसरी स्थापना गर्ने Ubunlog
Kubuntu १.18.04.०XNUMX LTS मा प्लाज्माको नयाँ संस्करण कसरी स्थापना गर्ने
प्याब्लिनक्स | | Kubuntu, ट्यूटोरियलहरू, Ubuntu
सं Kubuntu १.18.04.०XNUMX बायोनिक बीभर LTS स्थापना गर्न सक्दैन प्लाज्माको नयाँ संस्करण न त यसको ब्यापोर्ट रिपोजिटरीबाट। व्यक्तिगत रूपमा यो एक अपरेटिंग प्रणाली को नवीनतम LTS संस्करण को लागी समर्थन प्रदान गर्न मलाई गल्ती देखिन्छ, तर तिनीहरूको कारण हुनेछ। प्लाओस्माको सबैभन्दा अप-टु-डेट संस्करण जुन हामी बायोनिक बीभरबाट हेर्न चाहन्छौं त्यो v5.12.7 हो, जसको लागि कुनै विशेष भण्डार प्रयोग गर्नु आवश्यक छैन। तर के हामी कुबन्टु १.5.15.5.०18.04 एलटीएसमा प्लाज्मा .XNUMX.१XNUMX.? स्थापना गर्न सक्छौं? हो, तपाईं सक्नुहुन्छ, र यहाँ हामी तपाईंलाई यो गर्न सक्षमको तरिकाहरू सिकाउनेछौं।
जारी गर्नु अघि म केहि सल्लाह दिन चाहान्छु: त्यसो गर्न हामीले केही कन्फिगरेसन फाइलहरू सम्पादन गर्नुपर्नेछ। परिवर्तनहरू सुरक्षित हुनका लागि सिफारिस गरिएको छ, तर सबैजना आफ्नो कार्यको लागि जिम्मेवार हुनुपर्छ यदि तपाइँ अगाडि बढ्ने निर्णय गर्नुहुन्छ भने। धेरै व्यक्तिले समस्या बिना यी तरिकाहरू प्रयोग गरिरहेका छन्, तर जब हामी अनौपचारिक तरिकामा सफ्टवेयर चलाउँछौं तब हामी बाटोमा ढु stone्गा फेला पार्न सक्दछौं। यसको व्याख्या गरिसकेपछि, म विस्तारमा जान्छु प्लाज्माको नवीनतम संस्करण प्रयोग गर्न सक्षम हुन के गर्न आवश्यक छ कुबन्टु १.18.04.०XNUMX एलटीएस.
1 Kubuntu १.5.15.5.०18.04.x मा प्लाज्मा .XNUMX.१XNUMX.।
2 केडीई अनुप्रयोगहरू पनि अपडेट गर्नुहोस्
3 उत्तम: कुबन्टुको पछिल्लो संस्करणमा अपडेट गर्दै
Kubuntu १.5.15.5.०18.04.x मा प्लाज्मा .XNUMX.१XNUMX.।
«प्लाज्मा» र between बीचको भिन्नताका बारे स्पष्ट हुनु आवश्यक छ।केडीई अनुप्रयोगहरू। पहिलो ग्राफिकल वातावरण हो, जबकि दोस्रो अनुप्रयोग प्याकेज हो। पहिलो र सुरक्षित चीज भनेको शब्द परिवर्तन गरेर फन्ट सम्पादन गर्नु हो। यो प्राप्त गर्न पूर्ण प्रक्रिया निम्नानुसार छ:
यस आदेशको साथ हामी केडीई ब्याकपोर्ट रिपोजिटरी स्थापना गर्छौं।
अर्को, हामी डिस्कभर खोल्छौं।
हामी «प्राथमिकताहरू on मा क्लिक गर्दछौं।
अर्को कुरा भनेको शीर्ष बायाँ तिर रहेका तीन रेखाका साथ आइकनमा क्लिक गर्नुहोस् र "सफ्टवेयर स्रोतहरू" छनौट गर्नुहोस्।
हामी हाम्रो पासवर्ड प्रविष्टि गर्दछौं।
«अन्य सफ्टवेयर to मा जाऔं।
हामी कुबन्टु ब्याकपोर्ट स्रोत छान्छौं र "सम्पादन ..." मा क्लिक गर्दछौं।
हामी शब्द "बायोनिक" लाई "डिस्क" मा परिवर्तन गर्दछौं।
हामी सुरक्षित गर्छौं र बन्द गर्छौं।
जब उनले हामीलाई सोधे, हामी भण्डारहरू ताजा गर्न को लागी हो भनेर हौं।
हामी बन्द र खुला डिस्कभर। प्लाज्मा .5.15.5.१XNUMX.। उपलब्ध अपडेटको रूपमा देखा पर्नेछ।
केडीई अनुप्रयोगहरू पनि अपडेट गर्नुहोस्
यो अलि बढी जटिल छ र यो कत्ति गाह्रो भएकोले होईन, तर किनकि तपाईंले गर्नुपर्दछ फाँट बचत भएको ठाउँमा फाइल सम्पादन गर्नुहोस्। सिद्धान्त सरल छ तर, फेरि, सबैले आफ्नो कार्यको लागि जिम्मेवार हुनुपर्दछ यदि तिनीहरूले यी परिवर्तनहरू गर्ने निर्णय गरे। "चाल" निम्न कार्यहरू हुनेछ:
हामी डल्फिन खोल्छौं।
हामी जाँदै छौं रूट / आदि / उपयुक्त.
हामी फाईलको जगेडा प्रतिलिपि बनाउँदछौं स्त्रोत.लिस्ट, यो के हुन सक्छ भनेर।
हामी एक पाठ सम्पादक डाउनलोड गर्छौं जसले हामीलाई फाइलहरू प्रशासक वा मूल प्रयोगकर्ताको रूपमा सम्पादन गर्न अनुमति दिन्छ। उदाहरणका लागि, फेदर।
हामी फाईल खोल्छौं स्त्रोत.लिस्ट।, जसको लागि हामीले उद्धरणबिना "sudo कलम" लेख्नुपर्नेछ, फाईललाई टर्मिनलमा तान्नुहोस् र इन्टर थिच्नुहोस्।
हामी स्रोतहरू सम्पादन गर्छौं, पहिलो "बायोनिक" लाई छोडियो। हामी अन्य तीनलाई "डिस्को" मा परिवर्तन गर्दछौं।
पहिलो फन्टमा हामीले डिस्को डिing्गो राख्यौं:
हामी खोज खोल्छौं र जाँच गर्छौं कि केहि राम्रो छ कि छैन। यो गर्न गाह्रो छ। उत्तम अवस्थामा, हामी उपलब्ध प्याकेजहरू हेर्नु अघि धेरै त्रुटिहरू देख्नेछौं।
मैले यो भर्चुअल मेसिनमा स्थापित गर्न सफल भएँ, तर म ग्यारेन्टी दिंदिन कि हामी सबैले समान भाग्य भोग्नु पर्छ। यदि तपाईको केडीई अनुप्रयोगको नयाँ संस्करणहरू हुनु जरूरी छ भने, तपाई जहिले पनि "डिस्क" को लागी "बायोनिक" मध्ये एउटा परिवर्तन गर्न र परीक्षण गर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो एउटा ठ्याक्कै त्यस्तै हुनुपर्दछ जुन माथि उल्लेख गर्दछ। यदि यो बाहिर आउँदैन भने यो पहिलेको सूचीको चरण in मा गरेको ब्याकअप पुनःप्राप्त गर्नका लागि पर्याप्त छ। अर्को विकल्प भनेको एप्लिकेसनहरूको बेस प्याकेजहरू डाउनलोड गर्नुहोस् र म्यानुअल स्थापना गर्नुहोस्।
उत्तम: कुबन्टुको पछिल्लो संस्करणमा अपडेट गर्दै
मैले यो ट्यूटोरियल समाप्त गर्नु भन्दा पहिले, म यी सबैको बारेमा मेरो राय दिन चाहन्छु: एक प्रयोगकर्ताको रूपमा जसले हरेक months महिनामा अपरेटिंग प्रणाली अपडेट गर्दछ, कहिलेकाँही स्क्र्याचबाट, अपरेटि system प्रणाली अपडेट गर्नु उत्तम हुन्छ पछिल्लो संस्करणमा र यसमा ब्याकपोर्ट रिपोजिटरी थप्नुहोस्। तपाइँसँग X-buntu १.18.04.०XNUMX बाट सिधा अपडेट गर्ने बारेमा लेख छ यहाँ, र अर्को यदि हामी अझ उन्नत संस्करण प्रयोग गर्दछौं यहाँ.
के तपाईंले कुबन्टु १ 18.04.०XNUMX.x मा प्लाज्मा र / वा केडीई अनुप्रयोगहरूको नयाँ संस्करण स्थापना गर्न सक्नुभयो?
लेखको पूर्ण मार्ग: ubunlog » उबुन्टु-आधारित वितरण » Kubuntu » Kubuntu १.18.04.०XNUMX LTS मा प्लाज्माको नयाँ संस्करण कसरी स्थापना गर्ने
म एउटा अन्तिम टिप्पणी छोड्न चाहान्छु र त्यो यो हो कि प्लाज्मा .5.12.7.१२.। को संस्करण कुनै ब्याकपोर्ट थप्न आवश्यक बिना रिप्सबाट स्थापना गरिएको थियो।
नोटका लागि धन्यबाद। यस्तो देखिन्छ कि कुबन्टु १ 18.04.०XNUMX लिँदा अब अघिल्लो संस्करण देखा पर्‍यो र त्यसले मलाई भ्रमित गर्यो। म यसलाई परिमार्जन गर्छु।
Pablinux लाई जवाफ दिनुहोस्
उबंटु टर्मिनलमा छवि दर्शकहरू प्रयोग गर्न
कसरी फ्ल्याटप्याक, स्न्याप, वा AppI छवि प्याकेज पूर्ण रूपमा हटाउने